🥇 ▷ Talo: Baro sida aad jadwal ugu sameysan karto emaylka Gmail-ka ee Android ✅
Talo: Baro sida aad jadwal ugu sameysan karto emaylka Gmail-ka ee Android
Gmail waa adeegga iimeyl ee ugu wanaagsan uguna weyn uguna badan internetka. Google ayaa garatay sida loo abuuro soo jeedin u gaar ah waxayna u qaabaysay barnaamijyadeeda si ay uga faa iidaystaan ​​siinta dadka isticmaala.
Dabcan waxaa jira xulashooyin yar yar iyo howlo yaryar oo ay tahay in qof walbaa isku dayo oo adeegsado. Mid ka mid ah kuwa ugu dambeeyay waa jadwalka emaylka ee Gmail. Waxay joogtaa dhammaan dhufaysyada oo hadda waxaan barnaa sida loo sameeyo Android.
Faa’iidada inaad karti u leedahay jadwalka iimaylka waa sahlan tahay. Waxaan gacanta ku haynaa dhammaan farriimaha soo socda, annaga oo ka safnaa iyaga in loo diro xilliyada ku habboon. Waa astaamo cusub oo Gmail dhexdeeda ah in qof walbaa uu adeegsan karo hada.
Sida loo qorsheeyo jadwalka emails-ka ee Android
Kani waa hannaan fudud oo raacaya isla mabaadii’da fariin kasta. Sidaa darteed, waa inay si caadi ah u qoraan farriinta, iyagoo u diyaarinaya in loo diro. Qaabkaas, ku dar dirayaha, cinwaanka iyo farriinta.
Markaa waa inay furaan buugga qoraalka ee qoraal qoraalka ah. Tani waxay ku taal midigta sare ee is-dhexgalka. Gudaha waa inaad doorataa ikhtiyaarka Jadwalka Jadwalka.
Kadib waxaa lagu tusayaa aag cusub oo aad dooran karto markaad rabto inaad jadwal u sameysato emaylka la soo diri doono. Waxay dooran karaan subaxa, galabta ama fiidka, laakiin sida ugu fudud ayaa ah inay doortaan taariikh iyo waqti.
Halkaan waa inaad si sax ah u doorataa maalinta aad rabtid in fariinta la diro. Intaa waxaa sii dheer, waxaa wali jira baahi loo qabo in la qeexo waqtiga fariinta loo diri doono diraha. Goor dhaw kadib, emaylka ayaa loo ballamay.
Sida loo beddelo farriin jadwalka ku jirta Gmail ka
Haddii aad u baahatid, waad beddeli kartaa farriinta jadwalka ku qoran oo dhan. Kaliya furi menu-ka Gmail ka eeg raadinta calaamadda bogga. Midkani wuxuu ku xigayaa kuwa kale, wuxuu ku xigaa liiska farriimaha la diray.
Aaggan waxaad ka heli doontaa dhammaan farriimaha aad horey u qortey oo jadwalka ku soo diri lahayd mustaqbalka. Kaliya waxay u baahan yihiin inay doortaan fariinta ay doonayaan inay beddelaan.
Gudaha waxay ku beddeli karaan wax kasta oo fariinta ah. Haddii aad rabto, waxaad sidoo kale riixi kartaa doorashada Iska dhaaf, si farriinta looga saaro safka dirista.
Dhamaan fariimaha hada jira waa la badali karaa, la sixi karaa ama si fudud ayaa looga saari karaa. Sidoo kale waxay ku xiran tahay adeegsadaha inuu maareeyo safka safkiisa haddii ay u baahdaan inay beddelaan farriimaha ay hadda hayaan.
Tani waa hab fudud, dhakhso badan oo aad u xiiso badan oo lagu maareeyo farriimaha Gmail. Way fududahay in jadwalka loo diro e-maylka, kaas oo markii dambe loo diri doono diraha waqtiga saxda ah.